Wararkii u dambeeyay shirka ay leeyihiin Musharaxiinta Mucaaradka - Jowhar somali news leader
Wararkii u dambeeyay shirka ay leeyihiin Musharaxiinta Mucaaradka
By Mahad	 On Nov 21, 2020
Waxaa goordhow la filayaa inuu ka furmo magaalada Muqdisho shir ay leeyihiin Musharaxiinta Mucaaradka, kuwaasoo la baxay Midowga Musharaxiinta, waxaa uu shirkooda ka dhacayaa Hotelka Jazeera oo sanadkii 2016 xudun u aheyd halka laga soo bilaabay ololihii is bedel doonka.
Sida wararku sheegayaan shirka maanta furmaya ayaa socon doona muddo saddex cisho, waxaana looga hadlayaa xaalada siyaasadeed, doorashada iyo muranka weyn ee ka taagan Guddiyada doorashada ee dowladdu magacawday.
Musharaxiinta Madaxweynayaasha ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay soo gaaray Muqdisho, waxaana Musharaxiinta kala ah Xasan Cali Kheyre, C/kariin Xuseen Guuleed iyo Daahir Maxamuud Geelle ay sameeyeen dhoolatus siyaasadeed.
Shirar gaar gaar ahaa oo hordhac u ah shirka maanta ayaa xalay illaa shalay ay yeesheen qaar ka mid ah Musharaxiinta Madaxweynaha, waxaana shirarkaas ahaa mid meesha looga saarayay mad madowga qaar ee u dhaxeeyay Musharaxiinta.
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa xalay booqasho ku tagay hoyga Madaxweynayaashii hore iyo hoyga Hoggaamiyaha Xisbiga wadajir, isagoo raalli gelin ka bixiyay dhibkii dhacay 17 December 2017 oo ahaa weerarkii hoyga C/raxmaan C/shakuur.
Kulamadii xalay kaddib waxaa muuqata jawi cusub oo ay Muqdisho galeyso, iyo dabeylo siyaasadeed, waxaana isbaheysiga Musharaxiinta Madaxweynaha u muuqdaan kuwo culeys siyaasadeed saari doona Madaxda dowladda, si dib loogu noqdo Guddiga doorashada oo la sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan Nabadsugida iyo shaqaalaha dowladda.
Mahad 3404 posts
Madaxweyanyaal hore oo loo xilsaaray xal u helida dagaalada Itoobiya
Shirkii Musharaxiinta Madaxweynaha oo goordhow ka furmay Hotelka Jazeera